आइपीएलः धोनीको अगाडि विराटका सेना फेल, ७० रनमै ब्यंग्लोर अलआउट! - Everest Dainik - News from Nepal
आइपीएलः धोनीको अगाडि विराटका सेना फेल, ७० रनमै ब्यंग्लोर अलआउट!
काठमाडौं, चैत ९ । इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) को उद्घाटन खेलमै तीन पटक फाइनलमा पुग्न सफल रोयल च्यालेन्जर्स ब्यंग्लोरले ३ पटक उपाधि जितेको चेन्नई सुपर किंग्सलाई ७१ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको ब्यंग्लोरले १७.१ ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै ७० रन मात्र बनाउन सक्यो ।